China Premix Glass Beads BS6088A Kugadzira uye Fekitori | OLAN
Mucherechedzo wemumigwagwa uri pakati penzira dzinoshanda zvakanyanya uye dzakapfuma zvekutungamira zvakachengeteka traffic. Musiyano uripo pakati pegwara rekugadzira uye iyo pigmentation yezvinhu zvekumaka inopa pachena kuoneka kwekubvisa pasi pezuva mamiriro.
Chete kana uchibatanidza girazi mabheji ehunhu hwakanaka, iwo maratidziro emugwagwa anova anonyatsooneka chengetedzo chinhu usiku. Magirazi egirazi anoiswa kune yekumaka yekumaka zvinhu mune imwe yenzira nhatu. Zvinogona kuiswa pamberi pekumaka zvinhu zvisati zvaiswa, kana kuti zvinogona kudonhedzwa kana kumwayiwa mupendi yakanyorova kuseri kwependi yekushiza, kana chikamu chinogona kudonhedzwa pane yakatarwa maviri-chikamu epoxy kana thermoplastic zvinhu. Kumusoro kwepamusoro pemabheji kwakaputirwa nepende, iine chiito chekunanzva chepende inokwira kumusoro kwepakati pebhedi. Izvi zvinopa zviito zviviri. Inokiya magirazi egirazi mupende uye inobvumira iyo pendi kuti iite sechinhu chinopenya chinoratidza pamusoro pekudzokororazve, iine ruvara rwependi rinokanganisa ruvara rwechiedza chakadzoserwa. Chiedza chinopinda mugirazi yegirazi chakakombama uye chakanangisa kuseri kwebhedi uye chakaratidza kudzoka chakanangana nemwenje uye mutyairi.
Pashure: Drop On Glass Zviyero EN1423